China Geomembrane Welding Machine LST800 orinasa sy mpamatsy | Lesite
Ny milina welding dia mampiasa ny rafitra mafana wedge, izay kely ny habeny sy ny lanjany. Izy io dia mety amin'ny fametahana fitaovana mafana rehetra toy ny HDPE, LDPE, PVC, EVA, ECB, PP, sns. Ny vokatra dia ampiasaina amin'ny tonelina, metro, fiarovana ny rano, fambolena, tetikasa tsy tantera-drano sy anti-sepage amin'ny fako, simika. fitrandrahana harena ankibon'ny tany, fanadiovana ny maloto, fanamboarana tafo ary sehatra hafa.
➢ Nandray baiko kely.
➢ Hihaona amin'ny serivisy namboarina manokana.
➢ Mahafeno ny fepetra takian'ny 120V sy 230V any amin'ny firenena samihafa ary ny fenitra EU, ny fenitra amerikana, ny fepetra takian'ny plug UK.
➢ 800W no hery manara-penitra, indrindra mety ho an'ny welding fitaovana amin'ny hatevin'ny latsaky ny 0.8mm.
➢ 1100W no hery manamafy, indrindra mety amin'ny welding fitaovana amin'ny hatevin'ny mihoatra ny 0.8mm. Miaraka amin'ny kalitaon'ny welding mitovy, haingana kokoa ny hafainganam-pandeha ary ambony kokoa ny fahombiazany.
➢ Ny vokatra dia aterina miaraka amin'ny fonosana kojakoja fikojakojana fanampiny, ao anatin'izany ny fitaovana fikojakojana, Fuses, Spare Hot wedge ary kodiaran'ny Press.
Fanodinana bobongolo feno, fahamendrehana avo lenta, kalitao maharitra ary fiainana maharitra.
Advanced fanehoan-kevitra karazana rafitra fanaraha-maso nomerika manan-tsaina, fanaraha-maso avo tsara sy fiarovana mafy miasa.
Ny mekanika fanitsiana fanerena tsy manam-paharoa dia azo amboarina araka ny fitaovana sy ny hatevin'ny akora membrane mba hahazoana vokatra tsara indrindra.
Nafarana silicone fanerena-roller, tsara elasticity, avo mari-pana fanoherana, mafy fitafy fanoherana; Roller fanerena vy manokana knurled, anti-slip, tsy mitafy, tsara kokoa welding vokany ho an'ny fitaovana manify mihoatra ny 1mm.
Ny antsy wedge firaka manokana dia mifanandrify amin'ny fantsona fanamafisam-peo avo lenta, izay manana fahombiazan'ny fanafanana avo sy fiainana maharitra.
teo aloha: Masinina lasantsy tafo malefaka sy maro be LST-WP4
Manaraka: Geomembrane welder LST800D
Voltage naoty 230V/120V
Hery naoty 800W/1100W
Temperature fanafanana 50 ~ 450 ℃
Ny hatevin'ny fitaovana Welded 0.2mm-1.5mm (sosona tokana)
Seam Width 12.5mm * 2, anatiny lavaka 12mm
Wed Strength ≥85% fitaovana
Sakan'ny mifanipaka 10 sm
lanja vatana 5 kg
Geomembrane composite , Tetikasa fanodikodinana ny rano atsimo-avaratra
Tonelina tantera-drano board welding
Masinina Wedge Welding
Kitapo plastika mafana wedge
Welder Geo Hot Wedge LST900